‘Ciyaaraha Premier League ee hakadka galay oo dib u billaabanaya’ – Radio Damal
‘Ciyaaraha Premier League ee hakadka galay oo dib u billaabanaya’
Dowladdu England waxay sheegtay wadahadal lala yeeshay ururrada maamulo kubadda cagta in lagu go’aamiyey in 12-ka une dib loo furo ciyaaraha kubadda cagta ee Premier League.
Wasiirka dhaqanka England Oliver Dowden wuxuu sheegay ururrada maamulo kooxaha kubadda cagta in khamiisti kulan lala yeeshay isla markaana la isla qaatay ciyaaraha horyaalka Ingiriiska iyo Premire league in dib loo billaabo.
Oliver wuxuu intaasi ku daray qorshaha dib u billaabidda tartannada kubadda cagta inuu qayb ka yahay ballaadhinta fursadaha ay taageerayaasha ama dadka xiiseeya kubadda cagta ay ku heli karaan tabin toos ah oo ay ciyaaraha kala socdaan.
Sida oo kale, ku xigeenka madaxa caafimaadka ee England Jonathan Van-Tam wuxuu sheegay dib u billaabid kasta oo ciyaaraha loo sameeyo iney u baahan yihiin in si taxaddar leh oo aan degdeg ku jirin loo meel mariyo.
Kooxaha ka tirsan Premier League oo Isniintii kulmayna waxay ka wada hadleen “Dib u billaabidda mashaarciida” iyaga oo rajeeynaya iney ciyaaraha dib u billaawdaan 12-ka June balse ciyaarauhu ka dhacaan garoomo ay albaabada u xiran yihiin.
“Waxaan isku waafqanay wax weliba iney sidooda ku socon karaan haddi uu xaalka yahay mid sugaya badqabka iyo caafimaadka ciyaartooyda, tababarayaasha iyo shaqaalaha wax welibana laga horreysiiyo” ayuu yiri.
“Dowladda iyo khubaradannada ee caafimaadkana waxay diyaarin doonaan talooyinka iyo taageerada loo baahan yahay.”
Kulanka xiga ee kooxaha Premier League wuxuu dhacayaa Isniinta, iyada oo ay ciyaartooyda tababarrada billaabayana ay raacayaan awaamiirta kala fogaanshaha bulshada.
“Marka hore waxaan qiimeyn iyo dabagal ku sameeyneynaa tababarrada ciyaaraha looga diyaar garoobaya sida ay u hirgaleen ka hor inta ay toos u billaabmin tartannada kubadda cagta.
Kulanka Isniinta shacaya ayaa ku soo beegmaya xilli ay Bundesliga-ha jarmalka ay yihiin kuwa ugu hor billaabaya tartammadooda.
Ciyaaraha Premier League ayaa la hakiyey laga soo billaabo 13-kii bishii March cudurka safmarka ee Covid-19 awgii, iyada oo kooxaha intooda badan ay u harsanaayeen 9 ciyaarood.
Seddex ciyaartooy oo ka tirsan kooxda Brighton ayaa horraantii bisha May coronavirus laga helay.
Madaxa Premier League Richard Masters wuxuu sheegay in la go’aamiyey “sidi loo xaqiijin lahaa si kasta oo ay ku suuragaleyso iney kooxaha ciyaaraha looga tala galay xilli ciyaareedkan iney ciyaaraan”.